China Professional Tattoo Thermal Copier, famokarana milina mpanonta mpanamboatra sy orinasa | MOLONG
Copier Thermal Tattoo Professional, milina mpanonta
Masinina famindrana hafanana tatoazy
(1) Fandidiana maimaim-poana Fuss – miasa toy ny milina fax ihany
(2) Ny singa madinidinika dia tsy handray toerana sarobidy ao amin'ny studio tatoazy
(3) Fohy ny fotoana laninao amin'ny fanaovana sary mivantana amin'ny hoditra
(4) Avelao ianao hanana sary tsy mizara, milahatra ary mahafinaritra
(5) Ataovy mahomby kokoa ny tatoazy
(6) USB mifanaraka, afaka manonta ireo sary sy kopia voatahiry ao amin'ny solosainao
(7) Mora raisina, maivana maivana, vidiny mirary, avo lenta
(8) tahiry feno amin'ny fotoana rehetra
1.Portable noho ny iray amin'ireo copier nentim-paharazana. Tsy dia mavesatra loatra izy io fa mitovy ny asany.
2.Mameno ny adaptatera mifanaraka amin'ny fampidirana 100-240V. Ary ny herin'ny firenena rehetra.
3.Mifanaraka amin'ny PC.
4.Dable ary mora tazonina.
1 x Masinina famindrana
1 x Boky torolàlana anglisy
1 x Tady herinaratra
Quantity lehibe kokoa, vidiny ambany !!!!!
Ny sakan'ny scanning mahomby: 210 mm
Haben'ny rakitra: A5-A4
Hatevina antontan-taratasy: 0.06 mm-0.15mm
Hery: AC 110V-220V; 50Hz / 0.46A
Ara-dalàna: Miova eo anelanelan'ny karazan-javatra maivana. Rehefa manomboka ny asan'ny kopia mahazatra dia mandeha ny jiro mahazatra.
Halalin'ny 1: hametrahana ny tahirin-kevitra nalain'ny Deepness 1. Rehefa mandeha ny Deepness 1 dia maty ny Deepness 2
Halalin'ny 2: hametrahana ireo antontan-taratasy voakasa amin'ny alalàn'ny Deepness 2. Rehefa mandeha ny Deepness 2 dia maty ny Deepness 1.
Kopia: Hanombohana ny asan'ny kopia.
Ajanony: hampiato ny asan'ny kopia ..
Herinaratra: ny jiro dia manondro fa ny masinina dia vonona hiasa.
Hadisoana: ny jiro dia ny fanehoana zavatra tsy nety nitranga teo amin'ilay masinina. Rehefa mafana be ny TPH dia mandeha ny jiro.
1. Raha te hampijanona ny iraka fakana tahaka ianao dia tsindrio azafady ny lakile "STOP".
2. Raha maneno ny famantarana ny fampitandremana dia mandeha ny jiro ERROR ary mijanona tsy manadio intsony ny fanaovana kopia;
Tattoo Thermal Copier dia mamela ny mpanakanto tatoazy na matihanina handika endrika amin'ny taratasy stencil haingana sy mahomby amin'ny dingana vitsivitsy.
1,2 kg / 3.5 lb fotsiny ny lanjan'ny Tattoo Thermal Copier eto an-tany, maivana sy kely izy ka mora entina. Mifanaraka ampy ampy amin'ny toerana rehetra. Azonao atao ny manamboatra ny famoronana tatoazy amin'ny fotoana rehetra tianao
Ity mpanonta tatoazy ity dia manana hafainganam-pandeha fanontana haingana, hafanana ambany, tabataba ambany ary fampisehoana azo antoka. Haben'ny taratasy famindrana mifanentana: manodidina ny 8.5 santimetatra x 11 santimetatra (W * L). Mifanaraka amin'ny herin'ny 100-240v, afaka miasa ho anao eran'izao tontolo izao izy io
Maivana ity mpanonta printy ity ary azo afindra haingana ary mora tehirizina, manome anao fahafaha-bebe kokoa. Azonao atao ny manamboatra ny famoronana tatoazy amin'ny fotoana rehetra tianao.
Vita amin'ny akora ABS, izay tontolo iainana, azo antoka ary maharitra amin'ny fampiasana maharitra. Masinina tattoo Quantity avo lenta ho an'ny artista tatoazy Mora miasa. Tsy misy fanitsiana takiana sy fitsitsiana fotoana.
Previous: 32mm MO Stainless vy Cartridge Adjustable Tattoo Grip ho an'ny cartridges Needle Tattoo
Manaraka: Milina fanaovana tombokavatsa varahina vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina CNC
Magic 5CM Grips Manarona Elastic Adhesive Covers D ...
Kitapo koneza manety 12 PC ho an'ny sofina ...
Tantely azo ampiasaina mangarahara 25MM Miaraka amin'ny ...